I-China Container Type Generator Umkhiqizi Nomphakeli | Xinneng
Iyunithi yokuvumela iMonoblock
Vula Uhlobo Lweyunithi
Ikheli: Igumbi A206, No. 8 Workshop, Joint Construction Zone, Industrial Park, Hailing District, Taizhou City
Isitsha Uhlobo Generator
I-ZBW (XWB) Series AC Box-Type Substation
I-Wall Mounted Monoblock Refrigeration Unit
Uphahla Olubekwe Monoblock Refrigeration Unit
Lonke uchungechunge lwamasethi kagesi angenawo umsindo lungaphakanyiswa kusuka kuzingwegwe zokuphakamisa amehlo ngaphezulu
Umsebenzi wokudweba ongcono, upende onzima ofanele zonke izimo zezulu futhi ugwema ukugqwala isikhathi eside
Ukwakheka okuqinile namandla, i-muffle eyakhelwe ngaphakathi ezingeni lomsindo elincane Akukho mklamo wendabuko ongaphansi wokungenisa umoya; gwema uthuli nokunye ukungcoliswa umoya.
Kukhuliswe indawo yokungenisa nokukhipha umoya
Ibhokisi lekhebula elihlukanisiwe elihlukanisiwe, okulula ukuxhumeka kwekhebula Lungisa kuzo zonke izimo zezulu
i-dB (A) @ 50Hz
Isitsha siqinisekisiwe ukuthi okungenani sibe no-30% wokwehliswa kwezinga lomsindo qhathanisa nohlobo oluvulekile lwenethiwekhi ngomthwalo ogcwele.
I-China 0 # light diesel noma ngaphezulu inconyelwa ama-sutech gensets anesihlukanisi samanzi kawoyela ukuqinisekisa ubumsulwa kaphethiloli.
Phakamisa ukwamukela i-API CF noma uwoyela ophakeme, izinga lokushisa / i-viscosity ye-15W-40
Leli thebula lepharamitha liyireferensi kuphela futhi akukho saziso futhi uma kukhona ushintsho.
Isethi ye-generator yedizili equkethe uhlobo olujwayelekile nohlobo lokuthula
Yakhelwe futhi yenziwa ngokuya ngeziqukathi ezijwayelekile zomhlaba wonke, amamitha angama-20 ngaphansi kuka-1000KVA namamitha angama-40 ngaphezu kuka-1250KVA; Ngokuqinisekiswa kwe-CSC kokuhambisana ne-International Container Safety Convention, iyunithi lonke lingasetshenziswa ngqo njengeziqukathi ezijwayelekile zasolwandle, ezisindisa kakhulu izindleko zokuhamba; Zimbili iziqukathi ezingabonisa ukuqhuma ngaphakathi kwesiqukathi. Kukhona isibani sokuqhuma esikrinini sesibani / sokulawula, esivumelana nabasebenzisi ukuthi basebenze futhi basigcine; isitsha singavulwa ngaphambili nangemuva, futhi kuneminyango eseceleni ezinhlangothini zombili zebhokisi, okulula ukuthi abasebenzisi bayigcine futhi bayikhokhele kabusha. Kukhona iladi ngaphandle kwebhokisi; wonke amahinji, izingidi namabhawodi afakiwe Insimbi engagqwali iyasetshenziswa, futhi kufakwa amadivayisi okulwa nokugeleza kwamanzi emvula esitsheni;
Iphaneli yokulawula nekhabethe lokushintsha okukhiphayo kuhlangothi olufanayo lwesiqukathi, esivumelana nokusebenza kwansuku zonke komsebenzisi nokuxhuma kwekhebula lokukhipha;
Ukucushwa okujwayelekile kufakwe uhlelo lokuzibamba lukazibuthe lwaphakade lukazibuthe, oluthuthukisa ikhono lokuqala lwemoto futhi lunokuzivikela kokuhlanekezelwa kwamagagasi; Ithangi likaphethiloli nepayipi, ukukhishwa kukawoyela, okokuntweza, njll. Kunemiklamo eminingi eyingqayizivele, ethandwa ngabasebenzisi;
Akukhona kuphela ukusebenza okuphezulu kokuvikela ukuguga kwamalangabi okungagodli umlilo nezinto zokwakha umsindo ngaphakathi kwekhabethe lohlobo oluthule, kepha futhi kunomklamo omuhle kakhulu wokudla komoya nokwehlisa umsindo womsindo;
1. Beka ukotini omunca umsindo nensimbi ebhodini elibunjiwe uzungeze umzimba wesitsha futhi uqhakaze;
2. Beka ipuleti le-aluminium elingasheleli phansi phakathi kwebhokisi;
3. Umphumela wokunciphisa umsindo yi-70-80dBA (LP7m);
4. Ibhokisi lifakwe igumbi lokulawula, uhlelo lokuhambisa uwoyela, uhlelo lokukhanyisa, nendawo yokulungisa;
Langaphambilini Okupholisa Amanzi
Olandelayo: Uchungechunge lweCummins Generator
I-Diy Solar Power Generator
Cisha ugesi Solar Generator
I-Solar Energy Generator
I-Solar Powered Whole House Generator
I-Whole Home Solar Generator
Amadivayisi: Igumbi A206, No. 8 Workshop, Joint Construction Zone, Industrial Park, Hailing District, Taizhou City